Avy amin'ny Linux dia mirary anao: Tratry ny fialantsasatra, Krismasy ary taom-baovao ho an'ny rehetra | Avy amin'ny Linux
Avy amin'ny Linux dia mirary anao: Tratry ny fialantsasatra, Krismasy ary taom-baovao ho an'ny rehetra
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, hafa
Eny ary, fantatro fa amin'ny ankamaroan'ireto daty ireto dia resaka tsy misy fotony ary lavitra ny mahafaly ny fiainany, ny ataon'izy ireo dia vao maika mampangidy azy ireo, saingy mbola tsy te-hijery an'io fotoana io isika ary mirary ny taona vaovao ho an'ny rehetra am-pilaminana sy fitiavana ary tratry ny taona.
Taona tena tsara ho anay izy io. Na eo aza ny zava-misy fa noho ny olana amin'ny fifandraisana sy ny zavatra hafa tsy voafehinay dia tsy afaka nanavao ny bilaogy toy ny fanaonay taloha izahay, mahatalanjona ny statistika.
Hatramin'ny daty <° Linux manana:
Alexa Rank 161,651
Ny isan'ny mpampiasa an-tserasera betsaka indrindra dia 301, ny 6 Oktobra 2012 @ 9:40 maraina
Ireo lahatsoratra 10 be mpamaky indrindra dia:
Torohevitra azo ampiasaina hanatsarana ny Ubuntu 12.04 43.092
Torohevitra: baiko maherin'ny 400 ho an'ny GNU / Linux izay tokony ho fantatrao 😀 37.147
101 Antony TSY hampiasa Windows Phone. 14.659
Ny fizarana GNU / Linux 7 tsara indrindra tamin'ny taona 2012 12.783
Tutorial: Mametraka fonosana .tar.gz sy .tar.bz2 10.570
Fahazoan-dàlana sy zon'ny Linux 10.087
Ahoana ny fomba fividianana an'i Fedora: Fametrahana DVD DVD sy LiveCD an'i Fedora 9.656
Ahoana ny fomba: Fametrahana post-chakra Linux 8.818
Tsy fantatrao ve ny anaran'ny Android droid (robot maitso)? 8.250
Fitsapana ny Ubuntu 12.04 [Famerenana] + Fampidinana + Vahaolana ho an'ny NVidia 8.235
Ary ny antsika fiaraha-monina mitombo hatrany. Nahazo ny fiaraha-miasa amin'ny olona mahafinaritra izahay (merlin ny debianite, @Jlcmux, krel, dannlinx, Christopher castro, Alf, diazepan, helena_ryuu, Leper_Ivan, conandoel, DMoZ, Charlie-Brown, hexborg, Izy ireo dia Rohy, Citux, Iana, satanAG, RafaGCG, Scalibur, tsy tia, mamelà ahy raha tsy azoko lazaina azy rehetra) Tianay ny misaotra anao amin'ny fanirianao tsy misy fitiavan-tena hizara ny fahalalanao amin'ny rehetra.
Mazava ho azy, tsy afaka mijanona tsy hisaotra an'ireo mpampiasa rehetra izay manaraka anay hatramin'ny voalohany izahay, ary inona amin'ny lafiny iray sy iray hafa no manampy antsika hihatsara. Misaotra an'arivony koa ny Editora sy ny mpikambana ao amin'ny Staff.
Ny tanjontsika amin'ny taona ho avy: manohiza manaparitaka ny fahalalantsika amin'ny rehetra ary mandray anjara amin'izay vitantsika manerantany GNU / Linux. Ny fanirianay: Mijanona miaraka amintsika izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Avy amin'ny Linux dia mirary anao: Tratry ny fialantsasatra, Krismasy ary taom-baovao ho an'ny rehetra
45 hevitra, avelao ny anao
Tsy mino aho, na tiako izany, na mankalaza Krismasy, fa ho an'ireo izay mifanohitra amiko ... mifalifaly ...
Raha avelan'ny Mayana ... mazava ho azy.
mirary krismasy daholo
Ah fady, efa ela aho no niandry an'ity lahatsoratra krismasy ity, tena mampamiratra ny andro, tsy teo aho tamin'ny lahatsoratra farany satria… tsy fantatro izany. Faly aho fa manomboka taona vaovao ao amin'ny DesdeLinux. Manantena ny bilaogy vaovao aho, tohizo fa tena milay izy io. Fiarahabana avy any Costa Rica.
ridri dia hoy izy:
Merry Noely ho an'ny rehetra.
Mamaly an'i ridri
fredy dia hoy izy:
Tratry ny fialantsasatra ho an'ny rehetra ary mety ho tonga amin'ny desdelinux ny taona tsaratsara kokoa!
Mamaly an'i fredy
Calevin dia hoy izy:
Mirary fety sambatra ry vahoaka! Misaotra noho izay rehetra anjaranao!
Valiny tamin'i Calevin
Ry fokonolona malala.
Mirary anao ny tsara indrindra amin'ireto daty ireto ary miaraka amin'ny ankohonanao sy ny namanao mankafy ny orinasanao sy ny fankasitrahanao ary amin'ny herintaona dia feno fahombiazana ary ny tanjona kendrenao dia hohaingoina avokoa.
Tratry ny fialantsasatra avy amin'ny namanao Jorge Manjarrez Lerma sy ny fianakavianao.
Mirary krismasy sambatra ho antsika rehetra !!
Mahafinaritra ny mahita ny anaran'ny olona iray ao. Misaotra betsaka!!
Izaho manokana tsy dia tia Krismasy isan-taona, nefa mbola… Fety sambatra ho an'ny rehetra ary, ambonin'izany rehetra izany, ny taona manaraka dia tsara kokoa noho ity!
Bob mpanjono dia hoy izy:
Tsy misy isalasalana, na tianao ny Noely na tsia, dia mendrika fitsaharana tsara ianao, herintaona nomenao anay. Tsy mbola nahavita nianatra zava-baovao avy amin'ny rafitra maimaimpoana izahay ary tonga eto aminay miaraka amin'ity manaraka ity ianao 😉
Na izany aza, mankafiza amin'izao andro izao ary miaraha mifaly amin'ny olonao.
Miarahaba antsika rehetra izay nanatanteraka an'ity bilaogy mahafinaritra momba an'i Gnu / Linux ity.
Valiny tamin'i Bob Fisher
Misaotra amin'ny firarian-tsoa. Ny tsara indrindra ho an'ny ekipa iray manontolo avy amin'ny Linux, ho an'ireo mpampiasa bilaogy rehetra. Tratry ny KRISMASY!!! ary enga anie ka ho tontosa am-pifaliana amin'ny taona 2013 ny fanirianao, ny nofinao ary ny hetahetanao rehetra.
Valiny tamin'i Oscar
Mirary fety sambatra ho anao koa aho ary taona tsaratsara kokoa ho an'ny rehetra.
Merry krismasy sy taom-baovao sambatra 2013 ho an'ny rehetra!
ary Fahombiazana maro amin'ity bilaogy mahafinaritra ity izay mihetsika be ihany koa amin'ny fahasalamana G +!
Citux dia hoy izy:
Misaotra betsaka, ary ho an'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo dia manaova fotoana mahafinaritra na inona na inona tianao na tsia ireo antoko ireo. Ary io 2013 io dia feno zavatra tsara ho an'ny GNU / Linux, Rindrambaiko maimaim-poana ary indrindra ho an'ny <° Linux. Famihinana ho an'ny rehetra.
Mamaly an'i Citux
Tsy hanao sary tsara kokoa aho, fa ...
sary mahatsiravina inona xD
Miarahaba anao. Ankalazaina ny fialantsasatra tsy miasa na dia ara-pinoana aza
= D Misaotra anao izay manao asa mahafinaritra amin'ity tetik'asa ity !!! ...
Tena tiako ny Krismasy ho an'ny fahatsiarovana ny fahazazana, na dia tsy "mankalaza" aza aho izao.
Izaho dia mpino mahatoky amin'ny zavatra hitranga amin'ity 21 manaraka (tsy misy ratsy na loza ity), noho izany, mirary anao rehetra ho an'ny tsimbadika vaovao fitahiana lehibe indrindra (firariana soa, fahatsapana tsara) ...
Ho ela velona desdelinux !!! ...
PS A Tux dia ho tsara kokoa noho ny logo Windows ...
Toa tsy azonao ilay hevitra, sa tsy izany?
… U_U… Ie, fa milaza fotsiny izy io. xD ...
hatreto aloha dia mijery ilay sary aho, HAHAHAHAHA!
mirary fety sambatra ho an'ny rehetra, ary ny tena zava-dehibe, famihinana ho an'ny mpanaraka tsirairay, tonian-dahatsoratra sy tonian-dahatsoratr'ity bilaogy ity, mahafaly anao ny mpiara-miasa aminao ary antenaiko fa ny taona 2013 dia ho taona feno zava-bita ho antsika rehetra, ka tsarovy!!
aza misotro be loatra xDDD
Ho ela velona ry namana Linux !!!!
mikaoP dia hoy izy:
Toy izany koa, Tratry ny fialantsasatra sy taom-baovao sambatra ho an'ny fiarahamonina iray manontolo <º Avy amin'ny Linux izay mihalehibe hatrany
Valio amin'i mikaoP
Enga anie tsy ho vanim-potoana fotsiny io, fa herintaona feno fahombiazana sy fifaliana; Misaotra amin'ny maha sy fizarana 😉
Rubén dia hoy izy:
Mety mety na tsy tianao ny Noely fa miova ny taona ho an'ny rehetra, koa dia Krismasy Sambatra, Fetin'ny Tratry ny taona ary tratry ny taona vaovao daholo. Krismasy voalohany amin'ny Linux !! Faly be aho fa nanapa-kevitra ny handray ny dingana 😉
Valiny tamin'i Rubén
Miarahaba antsika rehetra! Tsy milaza izay hankalazana aho, fa ny Winter Solstice dia tsara ho an'ireo izay tsy mahazaka Krismasy nefa marina ara-politika hankalazana an'i Saturnalia. Sa izay.
Mirary fety sambatra ho an'ny rehetra. Ary fahombiazana maro ho an'ny rehetra sy ho an'ny DesdeLinux !!!
Psoniko dia hoy izy:
Salama daholo! Voalohany indrindra, fety sambatra na olon-drehetra. Ny tena marina dia nandritra ny roa herinandro dia nanaraka ny bilaogy aho, ary mahita lohahevitra tena tsara, miala tsiny fa tsy haiko taloha, satria efa taloha ny lahatsoratra ary tsy tokony hamelomana indray ...
Efa ela aho no niaraka tamin'ny Linux ary tiako ny zavatra novakiako tao amin'ity bilaogy ity. Manantena aho fa ho lehibe izy ireo.
Mihobia! ary Merry Noely daholo! ; P
Valiny amin'i Psoniko
Mirary fety sambatra daholo !!
Tena tsara ny bilaogy, efa nanaraka azy nandritra ny roa herinandro aho ary heveriko fa tena tsara.
Mihobia! ; P
Mirary krismasy amin'ny rehetra !!
Nanaraka ny bilaogy nandritra ny andro maromaro aho, ary tena tiako izay voalaza!
jeer dia hoy izy:
mirary fety sambatra, ary enga anie ny taona ho avy dia feno fifaliana ho an'ny rehetra !!!
Mamaly an'i befa
v3on dia hoy izy:
Mirary fety sambatra!
Mamaly an'i v3on
Mariano Gaudix dia hoy izy:
Mirary fety sambatra ry namana…. Miaraha miala voly amin'ny FIANAKAVIANA sy amin'ny namana.
Mey 2013 dia mahita antsika hevitra miady hevitra sy manatsara an'izao tontolo izao amin'ity FORUM LEHIBE ity
antsoina »AVY LINUX».
Fahombiazana maro amin'ny taona ho avy. Ho an'ny mpandray anjara tsirairay amin'ity BLOG ity.
Valiny tamin'i Mariano Gaudix
Ehhh ... eo ny forum, ity ny bilaogy.
Carper dia hoy izy:
Toy izany koa, betsaka ny arahaba anao, amin'ny ekipa lehibe "DesdeLinux", mahafinaritra ny mamaky azy ireo isan'andro. Ary koa ho an'ireo mpamaky rehetra ity pejy tsara ity, izay tsy manome vola firy amin'ny "ady lelafo", misaotra izany noho ny fitazomana pejy iray tsy misy fanehoan-kevitra manafintohina ny vondrom-piarahamonina GNU / Linux XD mihitsy, famihina lehibe ho an'ny rehetra, fialantsasatra sambatra ary samy manana ny tsara lavitra ny olona rehetra 2013. Fiarahabana avy any Mexico XD.
Mamaly an'i Carper
medina07 dia hoy izy:
Manantena aho fa manana fotoana mahafinaritra izy ireo ary tsy ho an'ireo daty ireo ihany, fa mandritra ny taona maro.
Mamaly an'i medina07
Semproms dia hoy izy:
Ho ahy dia daty mahafinaritra foana ireo, Merry Christmas daholo!
Valiny amin'ny Semproms
Mirary fety sambatra ho an'ny rehetra.
Ny marina dia, nihomehy tamin'ny logo wflix aho ho reindeer XD.
Hahaha, izany no hevitra ..
descargas dia hoy izy:
Enga anie ny tetikasanao rehetra amin'ny taona ho avy dia ho tanterahina, na manokana izany na amin'ny fiaraha-monina, ary izay rehetra mbola tsy nahazo toerana dia manao izany (ampidiriko ny tenako), satria amin'izay isika vao hivoatra, arahabaina….
Mamaly ny fisintomana
Sergio Lozjim dia hoy izy:
Krismasy sambatra sy tratry ny taona vaovao ho an'ny rehetra, fahafinaretana amin'ny orinasa tsara toy izany hatrany! Famihina lehibe ho an'ny Community ho an'ny tsara foana.
Valiny tamin'i Sergio Lozjim
Hidio dia hoy izy:
Mirary fety sambatra sy taom-baovao sambatra daholo.
Mirary fotoana mahafinaritra, ary araka ny hitanao fa mbola velona izahay, hehe.
Valio amin'i ShutDowN
Hahaha +1, andao hojerentsika rehefa mifarana amin'ny fanindroany izao tontolo izao.
cr0t0 dia hoy izy:
Mirary fety sambatra ho an'ny fiarahamonina DesdeLinux iray manontolo !!!
Valiny amin'ny cr0t0
Salama, Krismasy sambatra daholo, tsy mbola niarahaba anao aho tamin'ny fialamboliko
Raspberry Pi dia efa manana ny magazay fampiharana
HTML 5: dingana iray miala amin'ny fanarahana fenitra